Maamulka gobolka Banaadir dhisaya waddo bacaad ah oo ku taala degmada Kaaraan – Radio Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo waddada isku xirta xaafadda Xaawo Casir iyo isgoyska Fagax.
C/casiis Cilmi Xalane oo ah gudomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca howlaha guud oo ay wehliyeen mas’uuliyiinta maamulka degmada Kaaraan ayaa dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo waddada isku xirta xaafadda Xaawo casir ee duleedka Kaaraan iyo isgoyska Fagax, taasoo uu duugay bacaad badan, islamarkaana uu gaadiidka aad u isticmaalo.
Waddadaasi oo loo yaqaano Jabuuti islamrkaana marta xaafadda Cali Geeddi iyo Ceelka Garboole ayaa waxaa dhismaheeda iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo dadka deegaanka.
Sidoo kale waddadan oo ku xiran Jidka Sodonka ayaa noqotay mid bacaad ah waxaana ka shaqeeya gaadiidka dadwenaha ee loo yaqaano BL-ka oo dhibaatooyin farabadan ku qabay bacaadka wadadaasi xiray.
Gudoomiyaha degmada Kaaraan Axmed Xasan Yalaxoow ayaa sheegay in wadadani oo laga dhigayo Jaay ay muhiimd gaar ah u leedahay dadka deegaanka iyo gaadiidleyda isticmaasha waddada, wuxuuna tilmaamay in dhismaha wadadan ay iska kaashadeen maamulka gobolka iyo dadka deegaanka.
Wasiirka arrimaha gudaha "Dowladdu waxey dadaal ugu jirtaa meel marinta hiigsiga 2016-ka"